लकडाउन सकिएको केही समयपछि मात्रै परीक्षा हुन्छ : शिक्षामन्त्रीसँग अन्तर्वार्ता – ePublickhabar.com
epkuser अन्तर्वार्ता , शिक्षा , April 18th, 2020
रोकिएका परीक्षा सञ्चालनको तयारी, नयाँ शैक्षिक सत्र तथा विद्यालयल भर्नाको विषयमा सरकारले गरिरहेको तयारीबारे शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँगको कुराकानी
स्थगित भएका परीक्षाहरुले सञ्चालन कहिले–कसरी गर्ने तयारी छ ?
पहिलो कुरा त अहिले विश्वव्यापी महाविपत्ति आएको कोभिड–१९ को र यसविरुद्ध महाअभियान पनि चलिरहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन। हामीले शिक्षा क्षेत्रको कामलाई पनि विपदसँग जोडेर हेर्नु पर्छ।
बाहिरबाट आएकाबाट परिवारमा पनि संक्रमण भएको देखिएको छ। यसले गर्दा समुदायमा संक्रमण नफैलियोस् भन्नका लागि दोस्रो चरणको काम भइरहेको छ।
शैक्षिक संस्थाहरुलाई क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाइएको छ। यसले गर्दा परीक्षाहरु रोकिएका छन् भने नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात विगतका वर्षको जस्तो नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै हुने सम्भावना देखिएको छैन।
तर हामी रोकिएका परीक्षाहरु चाँडो भन्दा चाँडो गर्ने र पठनपाठन पनि सुचारु गर्ने तयारीमा छौँ। यसो भनिरहँदा हामीले आन्तरिक संक्रमण र छिमेकी देश विशेष गरी भारतमा संक्रमणको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हेरिनु पर्छ।
खुला सीमा भएकाले हाम्रो देशसँगै भारतमा पनि अवस्था सामान्य बन्दै गयो भने लकडाउन अन्त्य भएको तीन हप्तापछि एसईई र सोही अनुसार समय तालिका मिलाएर परीक्षा गर्ने तयारीमा छौँ।
परीक्षाका लागि हामीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग पनि परामर्श गरिरहेका छौँ। लकडाउन सकिए लगत्तै परीक्षा सुरु हुँदैन। कम्तिमा तीन हप्ताको समय दिइन्छ।
परीक्षाको व्यवस्थापन र समय कसरी मिलाउने सोच्नु भएको छ ?
विशेष गरी एसईई र कक्षा ११ तथा १२ को परीक्षा शैक्षिक क्यालेन्डरमा प्रभाव नपर्ने गरी गर्ने तयारी छ।
भिडभाड गर्न हुँदैन र अहिलेको महामारीले सिकाए अनुसार नै भिडभाड नहुने गरी दुई वा तीन सिफ्टमा परीक्षा लिने र परीक्षा केन्द्रमा हेल्थ डेस्कको व्यवस्था गरेर परीक्षा गर्ने छौँ।
परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरुलाई मन्त्रायलको सुझाव के छ ?
चीनमा अहिले जनजीवन सामान्य भए पनि विद्यालयहरु खेलेका छैनन्। मैले यसो भन्नुको अर्थ, लकडाउन लगत्तै परीक्षा भइहाल्छ भन्ने होइन। तपाईँ तयारी गरिरहनु भएकाहरुलाई समय दिइन्छ।
अर्को कुरा बुझ्नु पर्ने के छ भने महामारीले पक्कै पनि परीक्षा प्रभावित पारेको छ। तर यसले थप तयारी गर्ने समय पनि दिएको छ। घरमै बसेर तयारी गर्नु होला। शिक्षकहरुसँग मोबाइल मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ।
एसईईको तयारी गरिरहनु भएकाहरुलाई लक्षित गरेर हरेक दिन टेलिभिजनमा अध्ययन अध्यापनको कार्यक्रम भइरहेको छ। त्यो पनि हेर्न सक्नु हुन्छ। मैले हालैको मन्त्रिपरिषद बैठकमा टेलिभिजनबाट चलिरहेका कक्षाहरुलाई यथावत राखेर टेलिभिजनको पहुँच नपुगेका ठाउँमा रेडियोलाई पनि प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छु।
विद्यार्थीहरु यो समयमा आत्तिनु हुँदैन। संकटको बेलामा शान्त रहनका लागि विभिन्न व्यायाम तथा ध्यानका उपाय अपनाएर परीक्षाको तयारीलाई निरन्तर दिनु पर्छ।
कहिँ कतै परीक्षा हुँदैन, आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा नतिजा निकाल्ने कुरा सुन्नु भएको हुन सक्छ। त्यसो होइन, हामी परीक्षा लिनु पर्छ भन्नेमै छौँ। परीक्षा हुन्छ। विद्यार्थीहरुले तनाव मुक्त भएर तयारीलाई निरन्तर दिनुपर्छ। तर जतिबेला पनि पढिरहनु पर्दैन। समय मिलाएर पढ्नु होला।
नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात कसरी हुन्छ ?
संकटका बेला विद्यार्थीको सिकाइको सुनिश्चितता सामान्य परिस्थितिमा सामान्य नै रहन्छ, अहिलेको जस्तो असामान्य परिस्थितिमा असामान्य ढंगले नै सोच्नु पर्ने हुन्छ । हामीले नयाँ शैक्षिक सत्रलाई सक्दो सहज बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ।
लकडाउन अन्त्य भएको एक हप्ताभित्र कक्षा १ देखि ९ सम्मको नतिजा निकाल्ने र त्यसको एक हप्ताभित्र भर्ना प्रक्रिया गर्न हामीले आन्तरिक रुपमा सर्कुलर गरेका छौँ। स्थानीय तहले सोही अनुसार काम गर्ने छन्।
भर्ना अभियान तथा भर्ना प्रक्रिया गएका वर्षहरुको जस्तो भने गर्नु हुँदैन। भिडभाड नगरी टेलिफोन वा उपलब्ध भएसम्म अनलाइनबाट पनि भर्ना लिने प्रक्रिया गर्न आग्रह गरिएको छ।
लकडाउनका कारण प्रभावित भएको शैक्षिक क्यालेन्डरलाई सामान्य बनाउन केही योजना छन् कि ?
हो, मन्त्रालयले शैक्षिक क्यालेन्डरलाई सकेसम्म प्रभावित हुन नदिने गरी विकल्पको खोजी गरिरहेको छ। वैशाखको पहिलो हप्तासम्म अवस्था सामान्य बन्ने भयो र लकडाउन अन्त्य भयो भने त शैक्षिक क्यालेन्डरमा खासै प्रभाव पर्दैन।
त्यो भन्दा बढी दुई महिनासम्म प्रभावित भयो भने पनि जाडो तथा गर्मी बिदा र विभिन्न चाड पर्वका बिदालाई मिलाएर शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित हुन नदिने गरी हामीले छलफल गरिहेका छौँ।
सिकाइको अधिकारलाई जुनै पनि हालतमा सुनिश्चित गर्ने राज्यको दायित्व हो, त्यसको प्रयास गर्ने छौँ।
कक्षा १ देखि ८ सम्म पनि दूरशिक्षा ९रेडियो तथा टेलिभिजन० मार्फत अध्ययनको व्यवस्था गर्ने बारे पनि तयारी भइरहेको छ।
विश्व विद्यालयस्तरको अध्ययन–अध्यापनलाई भने खुला विश्वविद्यालय अवधारण अनुसार अनलाईनबाट अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था मिलाउने तयारी पनि थालिएको छ।
see नतिजा ३० असारसम्म परीक्षा बोर्डमा पुगिसक्नुपर्ने
असार १ बाट रेडियो र टिभीबाट पढाउन सुरु गर्ने( तालिकासहित)
‘कक्षा ११ र १२ को परीक्षाको विषयमा एक हप्तामा निर्णय हुने’
उच्चस्तरीय समितिलाई विद्यालय खोल्न हतार नगर्न सुझाव
लकडाउनको समयमा लोकसेवा तयारीको सुवर्ण अवसर